Fumana Impembelelo yakho: Yenza iincoko zehlabathi zikhokelwa ngumxholo ophefumlelweyo | Martech Zone
NgeCawa, ngoMatshi 22, 2020 NgoMvulo, nge-18 kaJanuwari, 2021 Douglas Karr
Intengiso yempembelelo idibanisa iimveliso kunye namazwi anamandla abenzi bemxholo yedijithali. Olu nxibelelwano lubangela incoko yokwenyani ejikeleze umyalezo wophawu, kusetyenziswa ukunyaniseka komdali kunye nokuzibandakanya kulandela amajelo eendaba ezentlalo, ngelixa uqhuba ulwazi kunye nokuzibandakanya.
Oku kudala ulwazi lokwazisa ngomlomo kwindawo ojolise kuyo, ngokuthe ngqo kumajelo eendaba ezentlalo apho bachitha lonke ixesha labo. Ukufumana Impembelelo yakho, sikunceda ufumane amazwi afanelekileyo e-brand yakho kwaye ubavumele ukuba basebenze ekusasazeni umyalezo wakho.
Fumana Impembelelo Yakho
The Fumana Impembelelo Yakho (FYI) iqonga lokuthengisa elinempembelelo livumela ii-brand ukuba zichonge abachaphazeli, baqalise amaphulo, balandele ukusebenza kunye neziphumo zengxelo. Sisisombululo sentengiso esiphembelela konke esinokuthi sincede i-PR kunye neenkqubo zentengiso zokufumana abathengi babo banxibelelane nabona baphembeleli babalaseleyo kuhlobo lwabo oluthile.
Iqonga lamva nje le-FYI libandakanya amandla okukhangela ngamandla, kubandakanya ubudala, indawo, ukuzibandakanya, ukufikelela kwezentlalo, iindidi zeshishini, isini kunye nobuhlanga. Ukongeza, ukuphuculwa kweqonga le-FYI kuvumela ii-brand ukuba zikhangele abachaphazeli ngamagama aphambili kumxholo wabo. Oku kuthetha ukuba iimveliso zinokukhangela igama eliphambili elinokuthi ngqo kwi-brand yabo kunye nabaphembeleli ngaphakathi kwenethiwekhi ye-FYI abasebenzise la magama aphambili, okanye amagama ahambelana nawo, kwiqonga leendaba loluntu, okanye ngaphakathi kwebhlog yabo.
Izincedisi eziziswe kolu guqulelo zazisiwe yiminyaka emithandathu yedatha, idityaniswe nengxelo yomsebenzisi, kwaye inyusa ngokukhawuleza inkqubo yokukhangela. Amabhanti ayazazi iindidi zabaphembeleli kunye nabaphulaphuli abafuna ukujolisa kubo kwaye siphucule inkqubo yokususa bonke ubunzima kwaye sibakhonze ngokukhawuleza.
UCristine Vieira, uMongameli kunye nomseki-mbumba weFumana Impembelelo yakho
Kwaye ukuba iqela lakho lokuthengisa lixakeke kakhulu okanye alinawo amava okusebenza nabashukumisayo, i-FYI inenkonzo yokuzikhethela ukufaka iqela labo labathengisi abaphambili ukuba bakwenzele. Kwaye, iziphumo zabo ziqinisekisiwe.
Ishedyuli yokuFumana iDemo yakho yeMpembelelo
Malunga nokufumana Impembelelo yakho (FYI)
Yasekwa ngonyaka ka-2013, Fumana impembelelo yakho sisisombululo sentengiso esekwe kwi-SaaS esekwe ngabathengisi kubathengisi. Ukuxhomekeka kuninzi lweempawu eziphambili kwi-United States, i-FYI inyusa itekhnoloji yobunini yokufumanisa abachaphazeli, ukulawula imikhankaso kunye nokulandela umkhondo weemetriki. Kwindawo yentengiso yedijithali eguqukayo, i-FYI ilawula ubudlelwane kunye neempawu kunye nokuzimatanisa kunye nefuthe elifanelekileyo ekunikeni iziphumo eziqinisekisiweyo. I-FYI izinze eScottsdale, eArizona kwaye ikhokelwa ngabaququzeleli bobambisene noJamie Reardon noCristine Vieira.
tags: Cristine vieirafumana abachaphazelifumana impembelelo yakhofyindlela yokufumana abachaphazelinefuthe yobudalaiimpembelelo kubaphulaphuliukuthengisa okunempembeleloujamie reardon